Nofeembar 5 , 2020
Toddobaadyada ugu horreeya Nofeembar waxay muujinayaan dhammaadka dhacdo gaar ah oo ka dhacday Dugsiga Hoose ee Groveland, oo ah Groveland Read-a-thon. Akhriska-a-thon wuxuu ardayda ku dhiirrigeliyaa inay ku farxaan aqrinta guriga iyagoo isla markaa lacag u uruurinaya iskuulkooda.
Akhriska-a-thon waa munaasabad sanadle ah oo ka dhacda Groveland iyo qaar badan oo ka mid ah dugsiyada hoose ee Minnetonka. Si ay ugaqaybqaataan, ardaydu waxay qoraan daqiiqadahooda akhriska maalin kasta waxayna uqalmayaan inay ku guuleystaan abaalmarino dhamaadka bisha haddii ay akhriyaan qadar aan caadi ahayn. Dhacdooyinka gaarka ah, sida Dharka maalinka astaamaha aad ku jeceshahay buugaaga, ku dar lakab kale oo xiise leh tartanka bisha dheer. Saaxiibada iyo qoysaska waxaa lagu casuumay inay "kafaala qaadaan" ardaygooda markay dhacdo, iyada oo loo marayo tabarucaad fidsan ama daqiiqaddiiba. Lacagtaan waxaa la uruuriyaa dhamaadka bisha oo loogu deeqa dugsiga. Munaasabada oo dhan waxaa soo qabanqaabiyey Groveland PTO waxaana madax u ahaa Jenny Benowitz iyo Ali King.
Akhriska-a-thon wuxuu u habeeyay qaab muuqaal ah masiibada awgeed, laakiin tani ma xadidin xiisaha ardayda ama kaqeybgalka. Sannadkan, in ka badan sidii hore, ardaydu waxay ku faraxsan yihiin akhriska iyo lacag-ururinta dugsigooda. Intaa waxaa sii dheer, PTO waxay go'aansatay inay dejiso yool gaar ah oo loogu talagalay Akhriska-sanadkaan:
"Mawduucayagu sanadkan waa 'Baasaboor Akhris', ayay sharraxeen Jenny iyo Ali. "Waxaa laga yaabaa inaan ku xaddidno meelaha aan ku safri karno sannadkan, laakiin waxaan dooneynaa in carruurta ay ogaadaan in buugaagta ay ku qaadan karaan waxyaabaha adduunka ka dhacaya."
Lacagta ka soo baxda 'Read-a-thon' waxay taageertaa dugsiga, laakiin Jenny iyo Ali waxay aaminsan yihiin in qiimaha ugu weyn ee munaasabaddu ku jirto faa iidada ay u leedahay ardayda. Adoo ku dhiirrigelinaya ardayda inay wax akhriyaan maalin kasta, Akhriska-a-thon wuxuu ardayda ka caawiyaa inay aasaasaan caadooyin waxbarasho oo muhiim ah oo socon kara nolosha oo dhan. "Daraasaduhu waxay muujinayaan in carruurta wax akhriya laga bilaabo da 'yarta ay ku fiicnaadaan tacliinta, waxay leeyihiin eray bixin ballaaran waxayna muujiyaan naxariis dheeraad ah oo dadka kale," Jenny iyo Ali ayaa leh. "Waxaa intaa dheer, akhrisku waa madadaalo iyo walwal weyn ayuu yareeyaa. Waxaan jecel nahay in lacag aruurinteenu ay dhiiri galiso howshaan muhiimka ah, marka lagu daro aruurinta lacagta."
In kasta oo tirada guud ee daqiiqadaha aqrinta ee dugsiga aan wali la xisaabin, Jenny iyo Cali waxay rajaynayaan in dugsigu ka badin doono rikoodhkiisii sanadkii hore, kaasoo ahaa 567,972 daqiiqo. Dib u hubi saaxiibadaaada Groveland bisha Noofambar 11 si aad u ogaato inta jeer ee ay ku qaateen akhriskii bishii la soo dhaafay!